မည်သည့်ခေတ်သစ်မိန်းမသည်သက်ဆိုင်ရာမလိုချင်တဲ့ကိုယ်ဝန်ကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ဖို့အတွက်မည်သို့၏မေးခွန်းကို။ ကလေးတစ်ဦး၏မွေးဖွားခြင်း - ကြီးမားတဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်, အားလုံးလိုအပ်သောနှင့်အတူပေးအပ်မရနိုငျသညျ့အခါကယခုအချိန်တွင်ပေါ်လာချင်ပါဘူး။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, သိပ္ပံရှေ့ဆက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း, အလွန်များစွာကိုယ်ဝန်ကနေသူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသိရသည်။ တိုင်းမိန်းမအဘို့အညာဘက်ကြောင်းတဦးတည်းတွေ့လိမ့်မည်။
အတားအဆီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းစနစ်များပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းအဖော်မရှိဘူးတဲ့သူမိန်းကလေးငယ်များအတွက်စံပြဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ technique ကိုရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: သုက်ပိုးလိင်အင်္ဂါများနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဟာတားဆေးသုံးပြီးပေါ်ပေါက်ပါဘူးဝင်သော။
တစ်ဦးအတားအဆီးတားဆေးမှနည်းလမ်းများကိုယင်းကွန်ဒုံး, ဦးထုပ်မြှေး, pessary, etc တို့ပါဝင်သည် ဒါဟာတစ်ကွန်ဒုံးကိုသာအသုံးပြုခြင်းကိုရောဂါကူးစက်မှုဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သတိပြုရကျိုးနပ်သည်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးမှန်မှန်မိတ်ဖက်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးသူကိုမိန်းကလေးကသာကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖြစ်ပါတယ် ဓတေား၏နည်းလမ်း ။
အားလုံးဓာတုအေးဂျင့်များ, သုက်ပိုးများ၏ပျက်စီးခြင်းကိုရည်ရွယ် spermicides, ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ထိရောက်မှု 80-90% အတွင်းကွဲပြားခြားနားသည်။ သူတို့ကထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတားအဆီးနည်းလမ်းများအပြင်အသုံးပြုကြသည်။
Spermicides အမဲဆီ, gels, လိမ်းဆေး, tampons, suppositories, တက်ဘလက်, Aerosol, etc ၏ပုံစံထုတ်လုပ်ထားပါသည် မည်သို့ပင်တဦးတည်းအပေါ်သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၏ပုံစံမဟုတ်ဘဲအမြင့်ဆုံးအဆင့်။ ကြောင့်သုက်ပိုးများ၏အသက်တာ၏ဝေါဟာရကိုအတော်လေးကြီးမားသည်ဟူသောအချက်ကိုမှအချို့နေဆဲဓာတုပစ္စည်းများပုံစံအတွက်အတားအဆီးကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောရန်ပုံငွေများ၏နောက်ထပ်ချို့ယွင်းချက် - ဖြစ်နိုင်သောယားယံခြင်းနှင့် မတည့် တုံ့ပြန်မှု။
အသုံးပြုသောကအခြားနည်းလမ်းများနှင့်အတူအပြိုင်နှင့်ပြက္ခဒိန်နည်းလမ်းအတွက်များစွာသောမိန်းမ။ ဤနည်းလမ်းကိုသာသံသရာရှိသူတို့အမြိုးသမီးမြားအဘို့အတရားဝင်သည်အမြဲအတူတူဥပမာ, 28 ရက်ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးဥထွက်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်ကြက်ဥရင့်ကျက်မှသာသည့်အခါတစ်ဦးကအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် - သံသရာ၏အလယ်တွင်အကြောင်းကို, ဆိုလိုသည်မှာ, 28 ရက်အတွင်းတစ်သံသရာမှာ - 14 နေ့က။ သုက်ပိုးများ၏သက်တမ်း -5ရက်။ ကိုယ်ဝန်ဖြစ်နိုင်ခြေထုတ်ပယ်ရန်,7ရက်မျိုးဥထွက်ပြုလုပ်ပြီးနောက်7မတိုင်မီကာကွယ်ထားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ 28 ရက်တစ်သံသရာ, လုံခြုံရေးလိုက်တဲ့အခါသံသရာ၏ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်ဖြစ်ပြီး, ထိုအချိန်ကာလ၏ကျန်အတွက်ဂရုတစိုက်ကာကွယ်ပေးသင့်သည်။
သံသရာကြောင့်စသည်တို့ကိုအအေးမိ, ဖို့အချိန်ကနေအချိန်ပြောင်းကုန်ပြီမှကွဲပြားစေခြင်းငှါအဖြစ်ဤနည်းလမ်းကိုအလွန်စိတ်မချရဖြစ်ပါတယ် များစွာသောမိန်းမတစ်ဦးသာမိုမီတာသို့မဟုတ် multimeter မျိုးဥထွက်သုံးပြီးမျိုးဥထွက်၏အတိအကျတွက်ချက်မှုနှင့်အတူဤနည်းလမ်းပေါင်းစပ်ပေမယ့်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုအတွက်မသက်မသာဒုက္ခနည်းလမ်းများဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပိုကောင်းကိုယ်ဝန် parous အမျိုးသမီးတွေမှကာကွယ်?
အလွန်ထိရောက်သောအဆိုပါ Intrauterine device ကို (IUD) ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏အရေးယူမှုတိုးမြှင့်သားအိမ်သေံနှင့်သန္ဓေသားငြင်းပယ်ခံရအတွက်ရလဒ်တွေကို (fertilization ဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်), အဖြစ် Ovum ၏ non-ရှင်သန်နိုင်စွမ်း။ ထို့အပြင်အကျိုးသက်ရောက်မှုပြည့်ပြည့်စုံစုံသရုပ်ဆောင်, သုက်ပိုးများ၏လှုပ်ရှားမှု mutes ။ သို့သော်များစွာသောမိန်းမကဒီဘာသာရေးနှင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားအရှုံးမပေးအဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးမျိုးအောင်ကြက်ဥ, ဆန့်ကျင်ညွှန်ကြားထားတစ်ခု abortifacient ရေတပ်နှင့်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါလိမ်မရွေးနှင့်စစ်တမ်းပြီးနောက်မီးယပ်သားဖွား installed, contraindications ၏ကြီးမားသောစာရင်းရှိပါတယ်။
ဟော်မုန်း - ဆေးပြား, ကွင်း, ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ - ယနေ့အထိအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ contraindications နှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏ကြီးမားသောစာရင်းရှိသည်။ သောကြောင့်သူတို့ထဲကကြောင့်သူတို့ကိုဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်တိုင်ပင်ရန်လိုအပ်ပါသည်လျှောက်ထားမီ, ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဟော်မုန်းစနစ်အားပြန်လည်တည်ဆောက်။
သင့်ရဲ့ခင်ပွန်းကစစ်ဆေးမှုများကိုပါအောင်မြင်လျှင်, သူငုပ်လျှိုးနေရောဂါကူးစက်မှုမပါလျှင်, အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံကိုယ်ဝန်7လအထိရှိနိုင်ပါသည်, ကပင်အသုံးဝင်သည်။
အနေအထား 69 အတွင်းလိင်
ဂျယ်လီ - တစ်ဦးဂန္စာရွက်
ငါမုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်အတူ gargle နိုင်သလား?
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် universal ပတ်တီး